(ညှိနှိုင်းဈေးရှိ) ပြင်ဆင်ပြီး_အသင့်နေထိုင်နိုင်သော #မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်...
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် #ဘဏ်အရစ်ကျဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သော (22 x 34) (၃)ထပ်ခွဲတိုက်(အိပ်ခန်းဖွဲ့ပြီး၊...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ #ပြင်ဆင်ပြီး_အသင့်နေ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းပါ (၁)ထပ်ခွဲလုံးချင်းတိုက်သစ်...
Dagon Myothit (South)| Yangon Region
(ညှိနှိုင်းဈေးရှိ) #လှိုင်မြို့နယ်တွင် အချက်အချာကျပြီး(City_View)ကောင်း #ဈေးတန်သော Penthouse_Condo အ
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် #မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော...
Mingalartaungnyunt| Yangon Region
Yankin| Yangon Region
Dawbon| Yangon Region
South Okkalapa| Yangon Region
Golden Oak condo အခန္းေရာင္းမည္
North Okkalapa| Yangon Region
Mingaladon| Yangon Region
🏪 သင်္ဃန်းကျွန်း ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ် အချက်အချာကျပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ရန်နေရာကောင်း မြေညီ(hall type)...
Thingangyun| Yangon Region
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်လို၊ ငှါးလိုသူများအတွက်
မိမိ ဝယ်လို၊ ငှါးလိုသော အိမ်ခြံမြေများကို အခုပဲ ကြော်ငြာတင်ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ရောင်းငှါးလိုသူများနှင့် အကျိုးတော်ဆောင်များမှ သင့်ထံသို့ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ ရောင်းလို၊ အငှါးထားလိုသော အိမ်ခြံမြေများကို အခုပဲ ကြော်ငြာတင်လိုက်ပါ။ ဝယ်လိုသူ၊ ငှါးလိုသူများက သင့်ထံသို့ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
Rent for5storey house
$ 6,000 (US Dollar)
မြေအကျယ်ပေ(100 ×120) မြေကွက်ပေါ်တွင်ဆောက်ထား လုံးချင်းအိမ် အသစ်စက်စက် ငှားမည်။
Myitkyina| Kachin State
🙏 ရွှေပြည်သာစက်မူ့ဇုန် 🙏 နေရာကောင်းဂိုဒေါင်ဌားမည်။
Shwepyithar| Yangon Region
Sqft (1800sqft ) 7th floor (A)Condo For Rent
$ 1,000 (US Dollar)
Kyauktada| Yangon Region
$ 2,000 (US Dollar)
သဃၤန္းကၽြန္း လမ္းမတန္းတြင္ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္
27 Lakh (Kyats)
လိႈင္ ျမကန္သာအိမ္ရာ ISM International School အနီးတြင္ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္
23 Lakh (Kyats)
(9) မိုင္ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ သံုးထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္
ဗဟန္း ဆရာစံလမ္းအနီး တြင္ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္
26 Lakh (Kyats)
22 Lakh (Kyats)
21 Lakh (Kyats)
Let's apply Home Loan at iMyanmarHouse.com to own your dream home!
Home Loan Calculator Home Loan Application
မန္တလေး အိမ်ခြံမြေ ဈေကွက် အခြေအနေ နှင့် iMyanmarHouse.com...
အစ်မတို့ ပုံမှန်ဆို အရင် iMyanmarHouse.com မရှိခင်တုန်းက တစ်ယောက်ချင်း company...
We are grateful to haveawebsite like iMyanmarHouse.com - Myanmar Land Real...
“Advertising our real estate listings is very easy and convenient, thanks to iMyanmarHouse. IT is becoming prominent is the real estate industry and we are grateful to haveawebsite like...
Always convenient and ideal to work with...
[English] “Everyone knows iMyanmarHouse. The enquiries come to us like – “ Did you post an ad on iMyanmarHouse, is this Win Theingi Real Estate?”. So, it is always convenient and ideal to...
iMyanmarHouse.com is Top in Myanmar- an interview with Aung Pyi Soe Real...
There are other properties websites out there, but none of them come close to iMyanmarHouse. In Myanmar, iMyanmarHouse.com is the TOP. A lot of done deals in properties and detached houses happened...
16 June 2022 to 15 July 2022
5 Mile Construction Material Park & Logistic Hub Online Sales Event
8 July 2022 to 10 July 2022
kalaw Garden Paradise Special Sales Event in Naypyitaw
iMyanmarHouse.com Mobile Application အခုပဲ ဒေါင်းလုပ် ရယူပါ
(Your data will not be shared with others and you can unsubscribe at any time.)